Abayishumi izinhlelo zokusebenza ezingcono kakhulu for bethengela yakho Christmas - Izindaba Rule
Abayishumi izinhlelo zokusebenza ezingcono kakhulu for bethengela yakho Christmas
Lesi sihloko osesikhundleni “Abayishumi izinhlelo zokusebenza ezingcono kakhulu for bethengela yakho Christmas” lalotshwa Stuart zivusa, ngoba theguardian.com ngoMgqibelo 28 November 2015 07.00 UTC
Akukona iminyaka eminingi ukuthi selokhu umqondo ezitolo efonini yakho - noma "m-commerce" njengoba amagama anzima bangaleso sikhathi akubeka - kwaba waklolodelwa ochwepheshe abaningi. Ngubani empeleni ukuthenga izinto kusuka ngokuhlukile leyo divayisi encane emaphaketheni abo? Njengoba kuvela, abantu abaningi.
Smartphones kanye amaphilisi bangawutholi nanini buyisela ngokuphelele isihogo liphumelele injabulo visceral of barging indlela yakho nxazonke aminyene izitolo high-emgwaqweni nge 17 izikhwama esandleni, kodwa kancane yokuhlela, amadivaysi wakho mobile kungakusiza ugweme umsebenzi onzima.
Njengoba 2015 sika Christmas shopping isizini ingena ugcwaliseka ngokugcwele, lapha kukhona ezinye izinhlelo zokusebenza ezingcono kakhulu ukuba uhlole bese uthenge izipho eliseduze nawe, amthanda yakho, futhi emsebenzini wakho ngokulambisa-eyaziwa uke letidvwetjwe Secret Santa.
Sekuyisikhathi eside Amazon kwaba go-sokuyokhonza bethenga Christmas, sibonga lwezifiso yayo sici, izincomo kanye nokubuyekeza, futhi - uma ukhokhela okubhaliselwe yayo Prime - lokuthumela nesheshayo yokuthutha ngomzuzu wokugcina panic uthenga lapho nomamncane extra noma ezimbili qinisekisa for kwasemini Christmas.
Uma ufuna for more izipho leftfield ngoba abantu ngempela obakhathalelayo, ihora noma amabili ukuphequlula Etsy kungazuzisa inala possibles. nokugxila kwawo "ngezandla, amagilebhisi imikhiqizo yokudala "kusho uzothola izipho ngokungaphezu kwalokho okubona big chain ezitolo - nakuba izinto ukuthumela abavela phesheya kwezilwandle, ungafuna oda zakuqala.
Pinterest akuyona lokusebenza shopping ezingxenyeni eziningi zomhlaba, nokho, nakuba ngo-US usanda kwethula "Izikhonkwane buyable" ukuthenga imikhiqizo ngaphakathi lokusebenza. Kubo bonke abanye, Pinterest kuyindlela elimangalisayo ukuze udlulise amehlo imibono - sezipho eziphakathi - bese ugcine engcono amabhodi akho siqu for reference ngesikhathi pre-Christmas inkathi. Ungasebenzisa futhi uhlelo lokusebenza ukuba athunge izithombe imikhiqizo ubona ngenkathi ezulazulayo izitolo wangempela.
Depop uhlezi eceleni Etsy njengoba umthombo ezinhle nezipho mnandi futhi eyingqayizivele, nge skew towards design, fashion vintage, vinyl abaqeqeshi. Kuyinto lokusebenza ezicatshangwe kahle nakuba, nge chat - ngokusebenzisa imibono kanye nemiyalezo ngqo - yingxenye esemqoka wokunquma ukuthi yini ofuna ukuthenga. Ungasebenzisa futhi it ngumthengisi, uma uthola izimpahla bayeke ukuthi uvumelane ethos yayo creative.
A Christmas bethenga roundup bekungeke kube ephelele ngaphandle eBay, okuyinto eye yaphumelela ngokuqinile zokusebenza yayo mobile eminyakeni yamuva ukuze uzenze esheshayo futhi kufinyeleleke ngangokunokwenzeka. Gcina amathebhu izinto ubhekene othi on imisebenzi kahle ngokusebenzisa izaziso izici kuzodlondlobalisa ukusetshenziswa kedatha, kuyilapho ibhakhodi-ukuskena yayo sici uhlala ewusizo sokuhlola eBay amanani for izinto ozibona ezitolo ngokomzimba.
Enye for ubani ofuna ukubheka ngalé izipho ezisobala lokhu ngoKhisimusi. Esinye sezici Gift Finder sika ewusizo kunazo yikhono bayamba behlele imikhiqizo yayo ibhajethi yakho kanye umemukeli: ngokwesibonelo, a search for £ 50- £ izipho 100 owesilisa yendlu uyaziqhenya "isitayela icon" lwenyusa imigexo, satchels, amabhokisi cufflink kanye yezicathulo ehlukahlukene.
Lutho best shopping lokusebenza ukwabelana igama layo nge ngoma Iggy Azalea, kodwa futhi enye yezindlela slickest ukuze uhlole, ukwabelana kanye ukuthenga izipho. I element social kuyingxenye enkulu ye Fancy: njengoba on Pinterest, wena ukwakha amaqoqo yakho siqu imikhiqizo nabangane zikwazi ukumbona. Note, the lwemali okuzenzakalelayo dollars, kodwa ungakwazi ukushintsha lokho okungaba amakhilogremu in the izintandokazi, nge Ukufakwa ohlwini zibonise ukuthi imikhiqizo umkhumbi UK.
Cabanga nje ukuthi ukube Sean Connery wayethethe indima uCaptain Kirk e Star Trek… amahlaya Weak ngegama layo eceleni, Schpock kuwufanele a rootle virtual in the run-up to Christmas. Izitayela ngokwaso lokusebenza njengoba 'ebhuthini ukudayiswa kanye CLASSIFIEDS lokusebenza ", ne Ukugcizelelwa izimpahla kagwayi ezigabeni ekhaya engadini noma umntwana kanye nengane esikhululekile imidlalo. It Ubuye focus wendawo: siphakamise imikhiqizo eduze nawe futhi nokunikeza ikhono lokubuza imibuzo noma enze intengiso yangasese.
Usemkhayeni ezinkulu themed bethenga zokusebenza yonjiniyela ContextLogic - Ikhaya ihlanganisa design and Decor, Cute ihlanganisa ubuhle kanye nokunye - Geek kungase uzwakale umnandi kakhulu uma uke ube yin for ubuchwepheshe. Ngemva kokubuza ukuthi yini oyithandayo ukuthenga, uphehla wena feed imikhiqizo bethembisa up to 80% izaphulelo. Worth ngokugcina iso zokubonga zanoma yiziphi izipho tech ucabangela.
Brits, eh? Sesikhathele ngaphezu zijabule emugqeni up in a esitolo ngokomzimba ukufunda ibhuku, bhala izinombolo phansi ephepheni namapensela encanyana, ke plonk ngokwethu phansi esitulweni kuze inombolo yethu kubizwa. Argos shopping, kuyafaneleka ukusho, ungomunye nezimfanelo ezingavamile zomunye wethu kazwelonke. Ngokujabulisayo, uhlelo lokusebenza umthengisi sika sidesteps the elinda: ungakwazi upheqa bese kungaba reserve for in-esitolo ukuqoqwa noma ukulethwa. Ayikho amapensela edingekayo.
Yilezo iziphakamiso zethu, kodwa lokho zokusebenza Ingabe usebenzisa ukuzothenga inthanethi, ukuthi uthanda batusa ngokuhamba-up to Christmas? Okwashiwo sigaba evulekile for imicabango yakho.
28074	0 Amazon.com, Apps, Isigaba, Izinhlelo zokusebenza ze-Android, Izinhlelo zokusebenza iPhone and iPad, Christmas, E-Commerce, eBay, Izici, Internet, Omakhalekhukhwini, Pinterest, Shopping uhambo, Smartphones, Stuart zivusa, Technology
← Ukubhema high-amandla insangu kungalimaza izinzwa ebuchosheni iPad Pro ukubuyekeza - Ngokuzayo creative ofuna okuhle →